प्रेमीलाई सुटकेसमा कोचेर जे’लवाट भगाउम खोजिन प्रेमिका…. – AB Sansar
January 16, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on प्रेमीलाई सुटकेसमा कोचेर जे’लवाट भगाउम खोजिन प्रेमिका….
एजेन्सी । मानिसले प्रेमका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ । आफुले माया गरेको ब्यक्तिलाई कसैले पनि समस्यामा परेको देख्न सक्दैन । एक युवतीले जे लमा रहेका आफ्ना प्रेमीलाई भगाउन गरेको उपायले प्रहरी प्रशासन दंग परेका छन् । तर उनको त्यो प्रयास भने सफल हुन सकेन । व्वाइफ्रेण्डलाई सुटकेसभित्र कोचेर जे लबाट भगाउने युवतीको प्रयास असफल भएको छ ।
भेनेजुयलाको उत्तरपूर्वमा रहेको जोसे एन्टोनीयो एन्जोआटेन्गुइ जे लभित्र थु निएका इब्राहिम जोसे भार्गस गार्सियालाई उनकी प्रेमीकाले भगाउने कोशिष गरेकी थिइन् । उनकी २५ वषिर्या प्रेमिका एन्टोनीटा रोब्लेस साउदाले गरेको प्रयास भने असफल भएको हो ।
कार चो रीको आ रोपमा प क्रा उ परेका इब्राहिम केही समय देखि जे लमा थिए, उनलाई भेट्न गएको गर्लफ्रेण्डले सुटकेसमा कोचेर उनलाई जे लबाट भगाउने प्रयास गरेकी थिइन् । कार चो रीको आ रोप मा इब्राहिमलाई अदालतले ९ वर्षको जे ल स जा य सुनाइएको थियो।
व्वाइफ्रेण्डलाई भेट्ने बहानामा गुलाबी रंगको सुटकेश लिएर जे लभित्र पसेकी एन्टोनिटालाई कसैले ध्यान दिएनन् । तर आधा घन्टापछि जे लबाट निस्कदा सुटकेश भारी भएर उनलाई घिस्याउन निकै गाह्रो पर्‍यो । त्यो देखेपछि एक सुरक्षा गार्डले शंका लागेर सुटकेश खोल्न लगाए ।
जब उनी सुटकेस खोल्न वाध्य भइन्, भित्र इब्राहिम पोको परेर बसिरहेका थिए । सजिलोका लागि सुटकेसभित्र अरु सामान पनि कोचिएको रहेछ । सुरक्षाकर्मीले तुरुन्तै इब्राइमलाई जे लभित्र हुले अनि उनकी प्रेमिकालाई पनि प क्रा उ गरे ।
१९ बर्षिया यि युवतीको अचम्मको प्रतिभा, सबैलाई चकित पार्दै वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने तयारि, सबैले एक पटक हेरेर सेयर गरिदिनुहाेला
छोरी अब मेरो मृ’त्यु छिटो हुदै छ भन्दै बाबुले गरे अन्तिममा १६ महिनाकी छोरीको विवाह, भावुक बनाउने तस्विरहरु
January 22, 2021 Ab-संसार